Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » ILufthansa yongeza iijets ezine zeAirbus A350-900 ezintsha kwizithuthi
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zaseJamani zokuPhula • Utyalo mali • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Technology • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
I-Airbus 'A350-900 icwangciselwe ukungena kwinkonzo kunye nophawu olusisiseko lweLufthansa ukusuka kwisiqingatha sokuqala sika-2022, ukomeleza umnikelo weprimiyamu yeenkampani ezintlanu.
Iqela laseLufthansa lisayina iikhontrakthi zokunyusa inqwelomoya ezine ezongezelelweyo zeAirbus A350-900.
Iinqwelomoya zenza igalelo elikhulu kuzinzo olukhulu nangama-30 eepesenti zepetroli kunye nokonga i-CO2.
Iqela laseLufthansa liceba ukuhambisa inqwelomoya entsha yeAirbus A350-900 ukusuka kwisiqingatha sokuqala sika-2022.
The Iqela leLufthansa ikhawulezisa ukuphuculwa kweenqanawa zayo ezinde. Iqela lityikitye isivumelwano sokuqeshisa ngenqwelomoya ezine zeAirbus A350-900 zikwimeko yasesidlangalaleni kunye neepetroli kunye nabaqeshi beAvolon, iSMBC Aviation Capital Ltd. kunye neGoshawk. Ngenxa yoko, iqela le-A350 leqela liya kukhula liye kwiindiza ezingama-21 ekuqaleni kuka-2022.
The AirbusI-A350-900 icwangciselwe ukungena kwinkonzo engundoqo yeLufthansa ukusuka kwisiqingatha sokuqala sika-2022, ukomeleza umrhumo weprimiyamu yeenkampani ezintlanu.
UGqr. Detlef Kayser, Ilungu leBhodi eLawulayo Deutsche Lufthansa AG, wathi:
“I-Airbus A350 yenye yeenqwelo-moya zeli xesha lethu. Yonga umbane, ithule kakhulu kwaye inezoqoqosho ngakumbi kunangaphambili. Abathengi bethu abayixabisi kuphela uzinzo kodwa kunye namava okubhabha okuphezulu kule nqwelomoya. Izivumelwano zokuqeshisa zisivumela ukuba sihlale siguquguqukayo kucwangciso lwezithuthi kwaye siwasebenzise kakhulu amathuba okuthengisa. ”
Iwele-injini Airbus Iinqwelomoya eziyi-A350-900 zisebenzisa kuphela malunga neelitha ezingama-2.5 zeparafini umgibeli ngamnye ngeekhilomitha ezili-100 ezibhadlileyo. Oko kujikeleze iipesenti ezingama-30 kunangaphambi kwabo bangaphambili, nefuthe elifanelekileyo ngokuhambelana nomgangatho wekhabhoni. Inqwelomoya iyakuthatha indawo yeenjini ezine zeenqwelo moya ezinde ukusuka kusapho lakwa-Airbus A340. Embindini weshumi leminyaka, inani leenqwelo moya ezine-injini kwizithuthi ezitsala ixesha elide lilonke kulindeleke ukuba lihle liye ngaphantsi kweepesenti ezili-15. Phambi kwengxaki, isabelo sasimalunga neepesenti ezingama-50.
Ngapha koko, inqwelo-moya entsha, eyonga umbane iya kunciphisa iindleko zokusebenza malunga neepesenti ezili-15 xa kuthelekiswa neendidi abaza kuthabatha indawo yazo.
Njengenxalenye yenkqubo yala maxesha yezithuthi, yexesha elide Iqela leLufthansa izakuthatha ukuhanjiswa kwenqwelomoya yeenqwelomoya ezili-177 ezimfutshane, eziphakathi kunye nezihamba ixesha elide kule minyaka ilishumi.
URobert Charles uthi:
Oktobha 6, 2021 kwi-07: 33
I-Airbus A350 yeyona nqwelo moya inde kakhulu yokuhamba ixesha elide ehlabathini. ILufthansa ithe ivumile ukuqesha iinqwelo-moya ezine ezintsha zeAirbus A350-900, zithathe iinqwelomoya ezintsha ezishiyeke zingenamakhaya.